June 2014 | OKKALA STORE
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ကားသစ် - ဗလာ ဗလာ ( ပြေတီဦး + ၀တ်မ...
Frankenste ( ရုံတင်ကား - မိမိဘ၀တွေရဲ့ အချိန်တွေထဲက...
မြန်မာဗီဒီယိုကားသစ် ကကြိုးစုံတဲ့ ဆောင်း (ကောင်းပြည...
နှင်းဆီ အပိုင်းအစများ ( နယူးယောက် အငြိမ့်)
အောင်ရင်ငြိမ်းရေးသားတဲ့ ‘ရိုမန်းဘော့စ်တွေရဲ့ ကမ္ဘာ’...
က ပြဖျော်ဖြေရင်း ဆီးထွက်ကျသူ အမျိုးသမီးအမေရိကန် ပြ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ဟော့တော့ ဇာတ်ကား 15 မိနစ်စာ ...
Playboy (အေသင်ချိုဆွေ) New Mp3 Album
လက်အပူလောင်ဒဏ်ရာနဲ့ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဆုရခဲ့တဲ့ မေ...
အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့သူရဲ့ အံ့ဘွယ်မြင်ကွင်း
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် မိုင်တိုင် (၂၆) ခွန်းဆင့်နြေ...
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ဌက်ကလေးရဲ့ မီးအိမ်ရှင် (မြင်...
The Second Sight 3D Full Movie
Godzilla Official (2014) Full Movie
♪ ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲစဉ်များ ၊ အချိန်များ ၊ ရလဒ်များ အာ...
ဖုန်းLockScreenမှာ မိမိနာမည်နဲ့ မိမိပုံလေးထည့်သွင်...
ဦးမောင်မောင် ဆပ်ကပ်ထက် တောင် မိုက်သေး ....
Pitbull - Timber ft. Ke$ha အမိုက်စား MTV
ယနေ့ထွက် မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ် အမုန်းမြို့ရိုး...
France3-0Honduras world cup 2014
Argentina2- 1 Bosnia world cup 2014
switzerland2- 1 ecuador world cup 2014
အနမ်း အီကွေရှင်း (အောင်ရဲလင်း + မိုးယုစံ) ယနေ့ထွက်...
XGALZ (ထင်း) New MP3 CD ALBUM
England 1 -2Italy ( World Cup - Barzil )
Hollywood ဇာတ်ကား 300 -2 Full Movie
ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် အစီအစဉ်ကို ဟာသပျက်ထားေ...
"GI TA SAR SO HLWAN PAING" PROMOTION @ DAGON CENTE...
Chile3- 1 Australia ( World Cup - Brazil )
Mexico 1 -0Cameroon ( World Cup - Brazil )
Spain 1 -5Holland ( World Cup 2014 - Brazil )
၀တ်မှုန်ရွှေရည် ၏ အသည်းယားစေသောပုံများ
မင်းသား & မင်းသမီး (အောင်ရဲလင်း + ဖွေးဖွေး) Part 2...
မင်းသား & မင်းသမီး (အောင်ရဲလင်း + ဖွေးဖွေး) Part 1...
Super Model Baby Maung နှင့် Photo Making
နန်းသီရိမောင် Photo Making Video
Photoshop ကို Beginner မှစတင်လေ့လာသူများအတွက် less...
ဂီတစာဆို လွှမ်းပိုင် ( MP3 New Album)
ဟား ( ၅ ) ကောင် အဖွဲ့ရဲ့ ပြည်သူ့အတွက် ရဲရဲတောက် သံ...
Miss Asia Pacific မယ်များ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း ဗီဒီယု...
ရင်သား ဆီလီကွန် ထည့်တဲ့ ခွဲစိပ်ပြုပြင်ခြင်း Video
ရင်သား အလှကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်...
Miss Universe ၀င်ပြိုင်သင့်ကြောင်း လူပြောများနေတဲ့...
ပိုပို collection ( Mp3 - Album)
ချမ်းချမ်း - အိမ်မက် ( New CD Album)
Maleficent Full Movie 2013 HD
Drive Hard 2014 (Full Movie by rmanibale14)
Full Movie IceMan 2014 Donnie Yen
ကျားသစ်မလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်... ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်...
ကယ်လီယိုပန်ထရာ ( စန္ဒီမြင့်လွင် ) New CD Album
Super Model MTV Album6- Track
Super Model MTV Album (4 - Track)
super model ရဲ့ MTV Album (3 - Tarck )
Super Model MTV Album 2-Track
Sandi Myint Lwin ရဲ. ကလီယိုပါထရာ
Super Model MTV Album
ဓာတ်ဆီ ဓာတ်ဆံ ဟာသဒရွှင်ဆေး mp3
ခင်ကြီး – အလိုက်တသိ(2014) Album
ကျတ်ကုန်းတို့ရွာ မြန်မာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား
ယနေ့ထွက် မြန်မာ ကားသစ် - ဗလာ ဗလာ ( ပြေတီဦး + ၀တ်မှုန်ရွှေရီ)
Posted by okkala net at 4:05 AM No comments: Links to this post
Frankenste ( ရုံတင်ကား - မိမိဘ၀တွေရဲ့ အချိန်တွေထဲက 122 မိနစ် ဒီကားကြည့်ပြီး ကုန်ဆုံးသွားတာ တန်တယ်လို့တောင်ပြောရတဲ့ကား)
Full Movie okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါလင့်များကို firefox address ဘားမှာ copy paste လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
မြန်မာဗီဒီယိုကားသစ် ကကြိုးစုံတဲ့ ဆောင်း (ကောင်းပြည့် + စံရတီမိုးမြင့်)
အပြည့်အစုံ ကြည့်ချင်ရင်တော့ okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲ တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 1:16 AM No comments: Links to this post
အောင်ရင်ငြိမ်းရေးသားတဲ့ ‘ရိုမန်းဘော့စ်တွေရဲ့ ကမ္ဘာ’ စာအုပ်
Posted by okkala net at 12:42 AM No comments: Links to this post
က ပြဖျော်ဖြေရင်း ဆီးထွက်ကျသူ အမျိုးသမီး
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လာဗေးဂတ်စ်က လမ်းဘေး ကပြဖျော်ဖြေမှု တခု မှာ မထင်မှတ်ပဲ အမျိုးသမီး အကမယ်က အမျိုသားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို ရှုးရှုးတွေ ပေါက်ချ လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသားလည်း သူ့ ကိုယ်
ပေါ် အမျိုးသမီးရဲ့ ဆီးတွေ ကျလာတော့ အံ့သြပြီး ထ ပြေးတော့တာပါဘဲ။
ဘေးမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း အံ့သြမင်တက်ကုန်ကြတယ်။ ဒီ ဗွီဒီယိုဟာ အွန်လိုင်းပေါ်
ရောက် လာတော့ ဝေဖန်မှု အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရပါတယ်။
ရယ်စရာလို့ ပြောသူပြော၊ ရှက်စရာလို့ ဆိုသူဆို။ တချို့က အကမယ်ဟာ အရက်မူးနေတာဖြစ်မယ်၊ တချို့ ဆီး မထိန်းနိုင်တဲ့ ရောဂါ ရှိတာဖြစ်မယ်၊ တချို့က ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ ဆိုသူလည်း ရှိတယ်။ အခြေအနေအမှန်ကိုတော့ ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးသာသိပါလိမ့်မယ်။
Posted by okkala net at 12:06 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ဟော့တော့ ဇာတ်ကား 15 မိနစ်စာ ဒီကားထဲမှာ မြင့်မြတ် ရယ် အခုတလော အရမ်းဟော့နေတဲ့ မော်ဒယ် ဘေဘီမောင် , စံရတီမိုးမြင့်တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
င်္Full movie ကိုတော့ okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:36 AM No comments: Links to this post
(Album Download Link)
.အေသင်ချိုဆွေရဲ့အသစ်ထွက် သီချင်း Album ဖြစ်တဲ့ "Playboy" Original ခွေကို နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေနဲ့ နေရာဒေသအရအလွယ်တကူမ၀ယ်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် Online ပေါ်ကနေ Free download ရယူနိုင်ကြစေဖို့Playboy Album ကို Upload တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်း ၁၃ ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ အောက်က link မှာ Download ရယူနိုင်ပါပြီ။
Download Link 1 => http://goo.gl/VhaKdw (MediaFire Link)
Download Link2=> http://goo.gl/wmYssn (Solidfiles Link)
Download Link3=> http://goo.gl/nqZLDZ (Zippyshare Link)
(အဆင်ပြေသူများကတော့ Original ခွေကိုသာ ၀ယ်ယူအားပေးကြပါရန် )
okkala mp3 selection ထဲတွင်လဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက် နားထောင်နိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 5:04 AM No comments: Links to this post
အနောက်သို့ခရီးသွားခြင်းမှတ်တမ်းမှ ဇာတ်ကောင်များစဖြစ်လာပုံ အသွင်သစ်ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကား ဒီကားထဲမှာ dota စကားနဲ့ပြောရရင် စွန်းဝူခုန်းရဲ့ spell ကြမ်းချက်က9လောက်ရှိတယ် ကောင်းခန်းလေးပဲတင်ပေးထားတယ် full movie ကြည့်ချင်ရင် okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲမှာ တင်ပေးထားတယ်
လက်အပူလောင်ဒဏ်ရာနဲ့ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဆုရခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုးရဲ ငယ်ဘ၀ Video
Posted by okkala net at 12:37 AM No comments: Links to this post
စက်ဘီးသမား တဦးရဲ့ ကားတိုက်ခံလိုက်ချိန် သုံးပတ်လောက် လည်ပြီး ကျသွာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန် အံ့သြစရာ ကောင်း လောက်အောင် ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပဲ လမ်းတောင် ထ လျှောက်နေခဲ့တာပါ။
ဒီလို အဖြစ်မျိုးက ထူးခြားဖြစ်စဉ်တခုပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာကို မဖေါ်ပြထားပေမယ့် ယူကျုမှာ လူကြည့် များ စီစီ တီဗွီ မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by okkala net at 4:19 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် မိုင်တိုင် (၂၆) ခွန်းဆင့်နေခြည်
အခုတော့ Trailer တင်ပေးထားပါတယ် full movie ကိုတော့ okkala မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ယနေ့ထွက် မြန်မာကားသစ် ဌက်ကလေးရဲ့ မီးအိမ်ရှင် (မြင့်မြတ် + ရွှေမှုန်ရတီ)
Full Movie ကိုတော့ မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:29 AM No comments: Links to this post
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 11:50 PM No comments: Links to this post
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ဒီမှာတော့ Trailer တင်ပေးထားပါတယ်
♪ ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲစဉ်များ ၊ အချိန်များ ၊ ရလဒ်များ အားလုံးကို Update ကြည့်နိုင်မယ့် - ကမ္ဘာ့ဖလားAPK v2.0.0 ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ ဘောလုံးဝါသနာအိုးများအတွက် JAS Myanmar မှရေးသား လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားAPK v2.0.0 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပနေစဲဖြစ်တဲ့ 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားရဲ့ ပွဲစဉ်များ ၊ ကန်မယ့်အချိန်များ ၊ ရလဒ်များ အားလုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပွဲစဉ်များအားလုံး ကို Final အထိရေးဆွဲပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Internet Connection လေးခဏ ဖွင့်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Application ပုံစံကိုမြင်သာအောင်အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြထားပါ တယ်ဗျာ။
Posted by okkala net at 10:36 AM No comments: Links to this post
ဖုန်းLockScreenမှာ မိမိနာမည်နဲ့ မိမိပုံလေးထည့်သွင်းထားလို့ရတဲ့LockScreenအလန်းလေး(APK)
မိမိနာမည် ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်ရာစာ သားလေးတွေ ရေးထားနိုင်ပြီး မိမိကြိုက်ရာပုံလေးတွေလည်းထည့်ထားနိုင်တယ်နော်။ ဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ပြီးရင် lock enable မှာအမှန်ခြစ်ပါ။ name နေရာမှာ စာသားလေးထည့်နော်...Select My photo ကိုနှိပ် Pick photo ကိုနှိပ်ပြီး မိမိကြိုက်ရာပုံလေးထည့်လိုက်ပြီး လန်းနိုင်တာတို့...
Posted by okkala net at 10:28 AM No comments: Links to this post
ယနေ့ထွက် မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ် အမုန်းမြို့ရိုး၏ ရင်ခုန်သံကမ်းရိုးတန်း ( နေမင်း + ရွှေမှုန်ရတီ)
Posted by okkala net at 9:00 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 8:40 PM No comments: Links to this post
အနမ်း အီကွေရှင်း (အောင်ရဲလင်း + မိုးယုစံ) ယနေ့ထွက် မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
အနမ်း အီကွေရှင်း (အောင်ရဲလင်း + မိုးယုစံ) ယနေ့ထွက် မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ် ကို မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကာများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 5:42 AM No comments: Links to this post
XGALZ (ထင်း) New MP3 CD ALBUM ကို okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by okkala net at 1:19 AM No comments: Links to this post
ငါးတန်းနဲ့ပြိုင် ဘယ်သူနိုင် အစီအစဉ်ကို ဟာသပျက်ထားသော စတားကောင်းထက် အဖွဲ့
"GI TA SAR SO HLWAN PAING" PROMOTION @ DAGON CENTER TWO
ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Dagon Center Two မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့
လွှမ်းပိုင် ရဲ့ "ဂီတစာဆို Hlwan Paing" တေးစီးရီး မိတ်ဆက်ပွဲ
Posted by okkala net at 11:44 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 11:39 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 11:33 PM No comments: Links to this post
facebook ရဲ့ account setting အကြောင်းအပိုင်း ( ၁ ) ။ facebook ရဲ့ အကောင့်setting တွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နားလည်သဘောပေါက်လိုသူများအတွက်ပါ။ဒီနေ့ မှာတော့general setting နှင့်security
အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည် သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်မိတ် ဆွေ
မင်းသား & မင်းသမီး (အောင်ရဲလင်း + ဖွေးဖွေး) Part 2
okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် လဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 12:25 AM No comments: Links to this post
မင်းသား & မင်းသမီး (အောင်ရဲလင်း + ဖွေးဖွေး) Part 1
Photoshop ကို Beginner မှစတင်လေ့လာသူများအတွက် lesson 1
Photoshop ကို Beginner မှစတင်လေ့လာသူများအတွက် သင်ခန်းစာလေးတွေ တင်ပေးပါ့မယ် Lesson 1 မတတ်သေးတဲ့သူများအတွက်အကျိုးရှိအောင်ပါ...သဘောကျတယ်ဆိုရင် Like ပေးဗျာ :P နောက်ထပ် lesson များကိုလဲ တင်ပေးမှာပါ
လူကြည့်များတဲ့ အိုပါဂမ်းနမ်စတိုင်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်လာသူ ကိုရီးယား အဆိုတော်
PSY ရဲ့ HANGOVER ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု အသစ်ဟာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကပဲ ယူကျုပေါ် ကို
တရားဝင် တက် လာပြီး တရက် အတွင်း ကြည့်ရှုကြိမ်ပေါင်း ၃ သိန်းကျော်
Posted by okkala net at 8:31 PM No comments: Links to this post
ဟား ( ၅ ) ကောင် အဖွဲ့ရဲ့ ပြည်သူ့အတွက် ရဲရဲတောက် သံမဏိဟာသများ Video
Posted by okkala net at 10:46 PM No comments: Links to this post
House Match ft. Beckham, Zidane, Bale and Lucas Moura: all in or nothing...
Miss Asia Pacific မယ်များ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း ဗီဒီယို
Posted by okkala net at 3:26 AM No comments: Links to this post
ရင်သား ဆီလီကွန် ထည့်တဲ့ ခွဲစိပ်ပြုပြင်ခြင်း Video ..ဗဟုသုတ ရ စေရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်
Posted by okkala net at 1:32 AM No comments: Links to this post
ရင်သား အလှကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် To Brazil ဆိုတဲ့ သီချင်း နဲ့ အက
ဘောလုံး ပရိတ်သတ်တို့ စောင့်စားနေတဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်
ပြိုင်ပွဲကို အခု ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ စတင် ပါတော့မယ်။ ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် To Brazil ဆိုတဲ့ သီချင်း နဲ့ အကကို အခုလို ယူကျုပေါ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခု ဗွီဒီယိုဟာ ရင်သား အလှကို ဖော်ကျူးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်နာတွေက ဘရာဇီး ကာနီဗဲလ်ပွဲတက် ရင်သားအလှတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။
Miss Universe ၀င်ပြိုင်သင့်ကြောင်း လူပြောများနေတဲ့ စူပါမော်ဒယ် မေဂရေစ်
Posted by okkala net at 1:03 AM No comments: Links to this post
ပိုပို collection တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
credit to MAMC
ချမ်းချမ်း သီချင်းကို ကြိုက်သူများ အတွက်
ချမ်းချမ်း - အိမ်မက် ( New CD Album) ထွက်ပြီ
ဒေါင်းလုပ်ရန်....အောက်ပါလင့်တွင် ယူနိုင်ပါသည် okkala mp3 selection ထဲတွင်လဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်
မူရင်းခွေ ကိုအားပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ
Hollywood မင်းသမီးချော ဂျိုလီ စုန်းမအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Maleficent Full Movie 2013 HD
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် လဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:58 AM No comments:
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:54 AM No comments:
ICE MAN full movie တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ကွန်မကောင်းရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:50 AM No comments:
ကျားသစ်မလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်... ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်လို့ရတယ်နော်...
Posted by okkala net at 9:41 AM No comments:
Posted by okkala net at 8:52 PM No comments:
Posted by okkala net at 3:12 AM No comments:
Posted by okkala net at 2:37 AM No comments:
Posted by okkala net at 2:20 AM No comments:
Posted by okkala net at 2:07 AM No comments:
Sandi Myint Lwin ရဲ. ကလီယိုပါထရာ အခွေ ထွက်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ OKKALANET မှာတော့ နားထောင်လို့ရနေပါပြီ
okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ Album ထဲမှာ နားထောင်လို့ရပါပြီ
Posted by okkala net at 1:15 AM No comments:
okkala music video ထဲက မြန်မာ MTV သီချင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 12:27 AM No comments: